प्रचण्डले गरे काठमाडौंबाट राजधानी सार्ने संकेत, तर्सिए जग्गा कारोवारी ! – Hamrosandesh.com
प्रचण्डले गरे काठमाडौंबाट राजधानी सार्ने संकेत, तर्सिए जग्गा कारोवारी !
काठमाडौँ ,२६ माघ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट सार्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल चलिरहेको खुलासा गरेका छन् ।
शनिवार नुवाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘केन्द्रीय राजधानीको कुरा यसअघि डा हर्कबहादुर गुरुङको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय राजधानी सार्ने कुरामा छलफल भएको छ । भइनै रहेको छ’ प्रचण्डले भने,‘केन्द्रको राजधानी त छलफलको विषय बन्न सक्छ भने भोलि प्रदेशको राजधानीको विषय सजिलै छलफलको विषय बन्न सक्छ । ’
प्रदेशको राजधानी पनि सहमतिमा सार्न सकिने उनको जिकिर थियो । बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न आफूहरुले सहजीकरण मात्रै गरेको बताए । प्रचण्डले नेकपाको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारको अनुरोधमा पार्टी केन्द्रले नाम र राजधानीका विषयमा सहजीकरण मात्र गरेको स्पष्ट गरे ।
‘पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले हाम्रो प्रदेश नाम राख्न र राजधानी तोक्न तपाईंहरुले सहयोग गरिदिनु पर्‍यो भन्यो भने पार्टी नेतृत्वसमक्ष तोक्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी आउँदो रहेछ’, उनले भने, ‘हामी सकेसम्म हाम्ले तोक्न नपरोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ।’
तर्सिए जग्गा कारोवारी
प्रचण्डले केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट सार्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल चलिरहेको बताइरहदा काठमाडौंका घर जग्गा कारोवारीहरु भने तर्सिएका छन् । यसअघि शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै प्रचण्डले चितवनलाई केन्द्रीय राजधानी बनाउन सकिने बताएसँगै चितवनको जग्गाको भाउ आकासिएको थियो । प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि काठमाडौंका जग्गा व्यवसायी तर्सिने र चितवनका जग्गा कारोवारीहरुले जग्गाको भाउ बढाउने वाहना पाएका छन् ।
संसार न्यूज़ बाट